Lalàn'ny etika sy deontolojia :: Mety ho tapaka tambin-karama ireo depiote tsy manaja fitsipika • AoRaha
Lalàn’ny etika sy deontolojia Mety ho tapaka tambin-karama ireo depiote tsy manaja fitsipika
Ho mafimafy ny sazy hihatra amin’ireo solombavambahoaka tsy manaja an’ireo andinin-dalàna mifehy ny fipitsika ara-deontôlôjia sy etika eo anivon’ny Antenimierampirenena, raha hahazo fankatoavana ao amin’ity andrimpanjakana ity, atsy ho atsy. Voafaritra ao, ohatra, fa ho tonga hatramin’ny fanapahana ny tambin-karaman’ireo olomboafidy ireo ao anatin’ny fotoana voafetra izany sazy izany.
« Ny komitin’ny etika sy ny deontôlôjia no manapaka azy », raha ny voarakitra ao amin’ ny tolo-dalàna novolavolain’ ny depiote Andrianambinina Djohary Lee. Io no mafimafy misongadina ao anatin’io lalàna io, ankoatra ny fandikana ny etikan’ny antoko politika nahalany an’ireo solombavambahoaka, izay mety hahafahana manongana azy eo amin’ ny toerany.
“Fepetra maro no tsy maintsy arahin’ireo depiote raha mihatra ny tolo-dalàna. Eo aloha ny famerana azy ireo tsy hampiasa ny fahefany amin’ny fiarovany ny tombontsoany manokana. Azon’ny komity miandraikitra ny fampiharana ny lalàna ny mandidy azy ireo hamerina an’ireo fanomezana nositrahiny tamin’ ny fomba tsy mazava. Tsy maintsy mampandre an’ireo mpikambana ao anatin’ny komity amin’ireo fanomezana na fanampiana voarainy ihany koa izy ireo”, araka ny voalaza ao amin’ny lalàna.
Mety mbola hisy fanovàna anefa io lalàna io satria tsy mikatona tanteraka ny adihevitra momba azy. Izay no antony nanemorana ny fandaniana ny tolo-dalàna amin’ny fotoana manaraka, araka ny notapahin’ireo solombavambahoaka tamin’ny alakamisy teo.
Baolina kitra – CAN 2021 :: Isehoana tranga maromaro ny lalaon’i Barea sy Côte d’Ivoire
Fibedesana nitera-doza :: Reny nidaroka nahafaty ny zanany vavikely